Kana mufambi anotaura kushanyira France, vanhu vakawanda wakaramba pakarepo kufunga Paris. zvisinei, France guta handiyo chete guta unokosha kushanyira munyika ino yakanaka, Kuenda muStrasbourg ndiye IN itsva. dzimwe nzvimbo dzakawanda vakaita vakakodzera kuonga zvose naka zvinotyisa uye zvakaitika zvavangapa.
Machechi kubva Ages nguva vari enchanting, nerinotyisa uye nyore anoshamisa kuongorora. uye Strasbourg Church rinomira akareba pakati pavo - sezvariri, sezvo richishandiswa kuva chirefu kupfuura chivako munyika kusvikira 1874! Vamwe zvikamu izvozvo zuva kare 1100, inova testamendi yechokwadi rini mamiriro ichi kare rave rimire. Ungave sarudza kuongorora mukati kana kuramba kuchengeta France, iwe uchazova mwoyo.
Strasbourg ane chechipiri pakukura chiteshi chechitima muFrance, zvakanaka pashure Paris. Kusvika nayo nechitima achiri zvakarurama, uye une mukana achitora soro-nokukurumidza chitima TGV (chitima nokukurumidza.) Zvinogona kutora iwe kubva Paris kuna muStrasbourg mu chete 2 maawa uye 20 maminitsi, panzvimbo dzose 4 maawa nemotokari.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-strasbourg-train/ - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)